Ngabe injini yokusesha iletha kanjani ithrafikhi ephilayo?
Emhlabeni wokuthengisa we-digital, kunezindlela eziningi ukuthi abanikazi bewebhu bangadonsela imoto emithonjeni yabo yewebhu. Ngaphandle kokungabazeki, thina sihlukile. Asikwazi ukuheha kuphela ukuhamba kwezinto eziphilayo (search), kodwa futhi ikhokhwe, ezenhlalakahle kanye nokudluliselwa. Yonke le mithombo yomgwaqo ingathuthukisa izinga lakho lewebhusayithi. Nokho, i-organic (search) injini yemoto ngumholi obonakalayo we-website ye-traffic ngoba yiyona eqeqeshiwe kakhulu futhi eguqulelwe. Umgwaqo we-Organic ushayela ngaphezu kwezingu-50% kuzo zonke izivakashi kumithombo ye-e-commerce web kanye namabhulogi. Yingakho umsebenzi wethu oyinhloko ukuheha izivakashi ezithintekile ezivela kusesho futhi siziguqulele kumakhasimende ethu akhokhelwayo avamile. Yiqiniso, kulula ukuthenga ithrafikhi kunokuwuthola ngokomzimba. Noma kunjalo, abasebenzisi banamathemba amaningi kulawo mawebhusayithi afakwe kwi-TOP kokusesha okuphilayo. Ngaphezu kwalokho, izimoto ezihamba phambili zibhekiswe kakhulu kunezikhokhwa futhi zinezithuba zesikhathi eside. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngendlela esingaqala ngayo ukuthola izimoto ezivela ezitsheni zokusesha ngokwemvelo.
Ziyini izizathu zokuthola ithrekhi yomsakazo wezinto eziphilayo?
Inani elikhulu lenzuzo etholakalayo abasebenzisi beza kusayithi lakho kusuka emiphumeleni yosesho ephilayo. Kusho ukuthi bonke abantu abafaka ebhokisini lokusesha le-Google ulwazi lokuthola ulwazi nolwazi lokuthenga bathola imiphumela yosesho lomuntu. Uma okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi kufana nokulingana nabasebenzisi abajwayelekile, kungenzeka ukuthi bazohlala kusayithi lakho bese beguqula amakhasimende akho noma amaklayenti akho. Ukusesha kwe-organic nakho kunenzuzo ekubhuloleni njengoba abasebenzisi bazobona izikhangiso eziningi ngokususelwa kumbuzo wabo. Ngakho-ke, kuyasiza njalo ukuthola ithrafikhi kusuka ekusesheni okuphilayo lapho kuziwa ekukhiqizeni imali evela ezikhangisweni kanye nezinhlelo zokubambisana. Enye inzuzo eyengeziwe yokukhiqiza ithrafikhi ephilayo ukuthi unganciphisa izinga lokunciphisa futhi uthuthukise isipiliyoni somsebenzisi ngesayithi lakho.
Izindlela zokusebenza zokwandisa injini yosesho
Ake sixoxe ngamasu asebenzisekayo angakusiza ukuba uthuthukise isikhundla sakho sewebhusayithi, uphakamise ukuchofoza-rate futhi uthole umgwaqo okhishwe ngaphezulu.
Ukusungulwa kwenjini yokusesha
I-SEO yinkimbinkimbi yezinkambiso zokuthuthukisa inhloso eyinhloko yokuthuthukisa iwebhusayithi ngokusho kwamazinga okucinga. Njengoba izinjini ezifana ne-Google zibeka phambili kuqala ulwazi lomsebenzisi ngesayithi elithile le-inthanethi, kufanele wenze okusemandleni akho ukwakha iwebhusayithi enobungane futhi elula ukuhamba. Ngaphezu kwalokho, isayithi lakho kufanele libe yi-maximally elifanele kumbuzo womsebenzisi. Kunezinhlobo ezimbili ze-SEO-off-page kanye nekhasi. I-on-page ingaqondiswa ngokugcwele nguwe kanye nochwepheshe bakho be-SEO. Zihlanganisa ukubhala kokuqukethwe, ucwaningo lwegama elingukhiye, ukuhlelwa kokuxhumanisa kwesakhiwo kanye nokuthuthukiswa kwe-web navigation. I-Off-page se-SEO ifaka igunya lesayithi emehlweni enjini. Udinga ukwakha umkhankaso wokwakha umxhumanisi wokuwina ukuze uthuthukise isikhundla sewebhusayithi futhi wenze imithombo yakho yewebhu ibonakale kakhulu ku-SERP. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho likhawuleka yi-bots search ukuze uthole injini ye-injini yokusesha. Ukukala impumelelo yakho yomkhankaso wokwenza kahle, ungasebenzisa ithuluzi le-Google Analytics kanye ne-Semalt Web Analyzer.
Ukukhangisa kokuqukethwe kuyindlela ephelele neyindlela elula yokuheha umzila we-search engine traffic. Isihluthulelo sempumelelo ekukhiqizeni okuqukethwe okukhulu ukudala okuqukethwe kubasebenzisi, hhayi izinjini zokusesha. Okuqukethwe kwakho kuwebhu kumele kuhambisane nalokho okufunwa amakhasimende akho. Udinga ukunikeza abasebenzisi bakho umbono wezobuchwepheshe mayelana nesihloko abathandayo ekukhuliseni idumela lakho lesizinda nokuthembeka kwabo kumkhiqizo wakho. Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuyingqayizivele, kuyasebenza futhi kusesikhathini. Ngaphezu kwalokho, faka imishwana ebalulekile kulo, ikakhulukazi ngezihloko ukuvumela ukusesha kubhekele kalula isayithi lakho Source .